Radio Ergo 22 August, 2017 GEDO
(ERGO) - Daanyeerro baahan oo ay abaarta saameysay ayaa labadii toddobaad ee u dambeeyay weerar ku qaaday tuulooyin hoostaga degmooyinka Buurdhuubo, Beled-Xaawo iyo Doolow ee gobolka Gedo. Inta la ogyahay 14 qof oo carruur iyo dad waaweyn isugu jira ayay ku dhaawaceen, 40 neef oo ari ahna way ku cuneen tuulooyinka Malkaahidda, Helo-mareer iyo Alangoo.
Xoolahaas siddeed ka mid ah waxay ku cuneen tuulada Malkaahida oo 19 km u jirta degmada Buurdhuubo, halkaas oo ay sidoo kale ku dhaawaceen 13 qof, shan jawaan oo galley ah iyo bal saarnaa saddex gaari-dameerna ay ku cuneen, sida ay noo sheegtay Xaliimo Dhoorre Xasan oo hantidaas uu qoyskeedu lahaa.
Daanyeerrada oo rax raxan u socda ayaa mararka qaar u dhacaya guryaha iyo beeraha, waxayna sidoo kale weeraraan carruurta iyo haweenka xoolaha la jooga iyo dadka lugeynaya ee raashinka wata.
Labo wiil oo ay dhashay Xaliimo oo la jiray ariga ay daanyeerradu cuneen ayaa ka mid ah dadka ay dhaawacyada soo gaareen. Waxay xustay inay daanyeerradu ka ciddiyeysteen wejiga iyo qeybo kale oo jirkooda ah xilli ay isku dayayeen inay ariga ka ceshadaan.
Xaliimo oo dhaqata 72 ari iyo lo’ isugu jira ayaa tilmaantay in galleyda iyo balka uu daanyeerku ka cunay ay u diyaarineysay inay u suuqgeyso Buurdhuubo. Waxayna lacag ahaan ku qiyaastay inay u dhiganto SoSh3.4M ($148). Waxay ka walaacsan tahay inay daanyeerradu dad cun isu rogaan haddii ay xaaladdu sidan sii ahaato.
Daanyeerradan ayaa ka yimid dhulka howdka ah ee gobolka Gedo markii ay abaartu qallajisay dhirtii ay miraha ka cuni jireen. Tuulooyinka Dalsan, Quruc ijaabo, Oodaa, Gaawiido, Alangoo iyo Malkaahida ayaa ka mid ah kuwa ay dadku sida aadka ah uga cabanayaan weerarrada daanyeerrada.
Axmed Muxumed oo ah xoolo-dhaqde beeraley ah oo jooga tuulada Helo-mareer ee duleedka Buurdhuubo ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in toddobaadkan ay daanyeerradu ka cuneen saddex ari ah, isla markaana ay ceejiyeen labo ka tirsan carruurtiisa ilaa ay ka celiyeen dad waddada marayay. Toddobaadkii horena xilli uu beertiisa ilaashanayay ay soo weerareen daanyeerro uu ku qiyaasay kun xabbo, kuwaas oo markii uu iska caabbin waayay uu beerta uga soo cararay.
Wuxuu sheegay in aysan garaneyn si ay isaga difaacaan daanyeerradan oo uu tilmaamay inay halis ku yihiin nolosha dadka iyo duunyada. Wuxuu haystaa xoolo gaaraya 84 oo isugu jira ariga iyo lo’da oo inta badan ay dhaqdaan beeraleyda degta webiga jiinkiisa.
Webiga Jubba oo mara tuulooyinkan ayay dadku uga faa’ideysanayaan dhinaca wax-soo-saarka beeraha iyo xannaaneysiga xoolaha.
Barkad ay dadku biyaha ka cabaan oo ku taalla tuulada Alangoo oo 34 km u jirta Doolow ayuu daanyeerku raxan raxan u yimaada, wuxuuna ka kala eryadaa dadka waraabka u yimaada si uu biyaha uga cabo. Cumar Isxaaq oo dadka tuuladan ka mid ah ayaa Raadiyo Ergo telefoonka ugu sheegay in uu daanyeerku tuuladan ku dhaawacay afar qof, 20 ari ahaana uu ku cunay.
Daanyeerka oo ka mid ah duurjoogta wuxuu leeyahay noocyo cuna dhirta miraheeda iyo hilibka xayawaanka kale. Dhulka howdka ah ee ka fog webiga oo uu ku noolaan jiray waxaa qallajisay abaarta, waana taas tan keentay inuu toddobaadyadan u soo dhowaado deegaannada webiga u dhow ee ay dadku joogaan.